Olee otú Melite a WordPress Omume Sidebar si iCal iji Google Kalinda (na ndị ọzọ na Google Fun!) | Martech Zone
Izu a, m banyere saịtị nke m maka Ngwa Google. Anọ m na-na a ugwu nke Spam ebe m email address agbanwebeghị na afọ na onye nnabata m (ọ bụ ezie na m hụrụ ha n'anya) ga-akwụ $ 1.99 ụgwọ maka adreesị email ọ bụla maka Nchedo adịgboroja, ihe Gmail eme n'efu. Ọzọkwa, na Gmail, ị na-arụ ọrụ na algorithms nke ọtụtụ nde ndị ọrụ ndị ọzọ wuru n'ihi ya ọ bụ ihe ziri ezi!
Ihe Ngosi nke Google
Enweela uru ndị ọzọ na ịkwaga Google Apps nke m na-aghọtaghị! Nke mbu bu ikike iwebata ngwa ngwa ozigbo nke Google, nke ana akpo Talk, ozugbo n'akuku m site na a Ihe Ngosi nke Google.
Ihe ngosi Google
Ma, m nwetara ugbu a Ihe ngosi Google, nke na-eme ka m mara mgbe m nwere email na, dị ka ọ dị taa, na-agbakwunye na ngwa Google ma na-eme ka m mata mgbe m nwekwara mmemme kalenda. Ọ bụ nnukwu ngwa.
Google Kalịnda iCal Mmekọrịta
Ikekwe akụkọ kachasị n'izu a bụ mgbe enyi m, Bill, zitere maka nkwado Kalịnda Google nke CalDav na ikike ịmekọrịta iCal na Kalịnda Google. Ọ dị ezigbo mfe:
Mepee Mmasị iCal
Tinye Adreesị Email Google na Paswọdu
Tinye adreesị Kalịnda gị:
Achọghị m ịkekọrịta kalenda mbụ m na WordPress sidebar, yabụ agbakwunyere Kalinda ọzọ na Kalịnda Google m wee tinye ya na iCal. Enwere Ntuziaka maka ịmekọrịta kalenda gị na iCal. Ọ bụ naanị URL dị iche.
Google kalenda WordPress mwekota
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ịwụnye Ihe Ntanetị Google WordPress Plugin ịgbakwunye wijetị gị Sidebar na parses na-egosiputa ihe omume gị Kalinda. Enwere ụfọdụ nuances na ngwa mgbakwunye a, agbanyeghị, ekwesịrị ị paida ntị na:
Banye maka Ihe data Google API Igodo, ị ga-achọ ya iji banye ntọala Plugin.
Mgbe ị banyere adreesị XML maka ndepụta Kalịnda gị, jide n'aka na ị dochiri ọnụ ikpeazụ nke url na 'zuru' ka adreesị ahụ wee dị ka nke a:
yourdomain% 40group.calendar.google.com / ọha / zuru
Egosighi wijetị aha dị na WordPress API na ndabara arụmọrụ. Otu onye dị mma iji tinye mgbazi maka nke a na Usoro Google mana ahapụbeghị ya. Ndị a bụ ntụzi aka na ihe koodu dochie iji dozie nsogbu aha wijetị.
Site na ejikọtara nke a, enwere m ike iji Google Notifier ma ọ bụ iCal wee tinye ihe omume ga-egosipụta n'akụkụ m! Oge ọ na-ewe dabere na ntọala mmekọrịta gị n'etiti iCal na Google.
Tags: kalendakalenda googledị egwuWordPress
Aug 5, 2008 na 8: 29 AM
Nke a amaka! Nchịkọta kalenda site na listi mmemme m bụ mgbakwunye zuru oke na saịtị PR m - http://www.indy-biz.com!
Ọzọkwa na-egosi na ị bụ onye na-aga guy na WordPress! Daalụ!
Feb 11, 2009 na 11:53 PM
Nke ahụ mara oke mma. Agbalịrị ọtụtụ kalenda ihe omume, achọtaghị onye kwesịrị ekwesị. Ngwaọrụ Google wpng dị mma belụsọ maka isi n’elu. Na, enweghi m ihe omuma banyere ide akwukwo. Ya mere…
Obi m nile.
Na-agbakwunye ekele m maka akwụkwọ mmado ndị dị n'elu….
Ihe omuma ihe nlere gi nke oma na nke oma nyere aka nye webmaster na-agbanwe site na html gaa na wordpress.